टिचिङमा कोरोना संक्रमित डाक्टर नै संक्रमितको उपचार गर्दै ! - MassiveKhabar
टिचिङमा कोरोना संक्रमित डाक्टर नै संक्रमितको उपचार गर्दै !
by news update September 18, 2020 News
उनले कोरोना संक्रमण भएको दुई सातापछि आफू नियमित सेवामा फर्किएको जनाए। ‘भदौ १६ गते मलाई संक्रमण पुष्टि भयो। त्यसपछि २७ गते दोस्रो परीक्षण गर्दा पनि पोजेटिभ नै देखियो,’ डा. शर्माले भने, ‘१० दिनपछि लक्षण नभएको स्थितिमा संक्रमण भए पनि अरूमा सर्दैन भन्ने छ। त्यसैले १५ दिनपछि नियमित काममा फर्किएको छु।’
डा. शर्माले भने, ‘मलाई संक्रमण भएको सबैलाई थाहा थियो। पछि सेवामा फर्किएपछि पनि संक्रमितहरूलाई म अझै पोजेटिभ छु तर लक्षण नभएकाले अरूमा सर्ने सम्भावना हुँदैन भनें। त्यसपछि उहाँहरूले पनि त्यसलाई सहज रूपमा लिनुभयो। अहिले त सेवामा खटिन थप हौसला मिलेको छ।’
लक्षण हुँदासम्म उनी घरमै ‘होम आइसोलेसन’ मा आराम गरिरहेका थिए। तर लक्षण हराएपछि भने उनलाई घरमै बसिरहन मन लागेन।
‘सुरूमा आफैंलाई अप्ठ्यारो महशुस भएको थियो। तर सहकर्मी सबैले सकारात्मक लिनुभयो। त्यसमाथि हामी सुरूदेखि नै जुनबेला पनि संक्रमण हुनसक्छ भनेर त्यहीँ मानसिकताले सेवामा खटिएका थियौं,’ उनले सम्झिए।
‘हिजोबाट एक जना संक्रमित नर्स पनि काममा फर्किनु भएको छ। उहाँमा पनि लक्षण छैन,’ उनले भने।
‘अब फेरि दुईचार दिनमा अर्को एउटा परीक्षण गर्ने भनेको छु। अब चाहिँ नेगेटिभ आउँला कि,’ उनले भने।
(श्रोत : सेतो पाटी)